Events – Internet Journal |
April 28, 2017 IJ+
How To	Computer
Review	Mobile Phone
EventsHome Category: Events Events Alpha Festival 2017 ကျင်းပပြုလုပ်မည် Apr 28, 2017 Events STARFISH Education ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲကျင်းပ Apr 03, 2017 Events Center for Vocational Training (CVT-Myanmar) သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပ Apr 03, 2017 Featured
EventsMPT ၏ သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုးရေအကျိုး အစီအစဉ် Mar 29, 2017 မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) ရဲ့ “သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုးရေအကျိုး”... Featured
EventsPanasonic အမှတ်တံဆိပ် Business Projector နှင့် Pro Display များမိတ်ဆက် Mar 15, 2017 လုပ်ငန်းသုံး၊ ကျောင်းသုံး Panasonic အမှတ်တံဆိပ် Business Projector နှင့် Pro Display... EventsASUS မှ မော်ဒယ်သစ်ပစ္စည်းများ မိတ်ဆက် Feb 27, 2017 ASUS မှ မော်ဒယ်သစ် ပစ္စည်းများမိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ Dealer gathering ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅... EventsEPSON ကနေ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းသုံး ဆိုင်းဘုတ်ပရင်တာ သုံးမျိုး Feb 24, 2017 EPSON ကနေ SureColor S-Series ထဲမှ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့... EventsMini FSV VRF အမျိုးအစားလေအေးပေးစက်များကို Panasonic မိတ်ဆက် Feb 21, 2017 လုပ်ငန်းငယ်တွေနဲ့ အိမ်ရာတွေမှာ သုံးနိုင်တဲ့ Panasonic တံဆိပ် Mini FSV VRF... Featured
EventsSP 2016 Grateful Night Party Feb 20, 2017 Silicon Power ရဲ့ 2016 Grateful Night Party & Best sellers awarding ceremony ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်က Chatrium Hotel မှာ... EventsIndustrial Seminar on Travel & Tour Operations in Myanmar” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ Feb 15, 2017 Temasek International College ကဦးစီးတဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍအကြောင်း အတွေ့အကြုံ... EventsGet Chance ရဲ့ ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် ဈေးရောင်းပွဲကျင်းပ Feb 15, 2017 Free Lucky Draw Website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Get Chance ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် အသုံးပြုတဲ့သူတွေကို... Featured
EventsCVT Myanmar ရဲ့ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရပ်များနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ Feb 13, 2017 CVT Myanmar ရဲ့ နည်းပညာ၊ သက်မွေး ပညာရပ်များနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ... Featured
EventsNew Channel Engagement Event ပြုလုပ် Feb 13, 2017 SONY နဲ့ TMW Enterprise ပူးပေါင်းပြီး New Channel Engagement Event ကို နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာ... 1